November 23, 2021 N88LeaveaComment on डिग्रीको थेसिस प्रतिकिलो १२ रुपैयाँमा बिक्री !
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तहको सोधपत्र (थेसिस) लेख्ने विद्यार्थीले तीन प्रति थेसिस विश्वविद्यालयमा बुझाउनुपर्छ । एक प्रति क्याम्पसमा, एक प्रति केन्द्रीय पुस्तकालयमा र एक प्रति परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यसरी विद्यार्थीले बुझाएको थेसिस परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भने पुराना कागजको रुपमा उद्योगलाई बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । कार्यालयले राख्ने ठाउँको अभाव भएको कारण […]
एमाले महाधिवेशनमा यी हुन् चार आश्चर्य
November 23, 2021 N88LeaveaComment on एमाले महाधिवेशनमा यी हुन् चार आश्चर्य
कुनै बेला एमालेका महाधिवेशनहरूले नेपाली राजनीतिलाई महिनौं तरंगित पार्थे । पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा, मुद्दा र कार्यक्रमहरूमाथि सघन छलफलहरू चल्थे । पार्टी सदस्यहरूका लागि त यस्ता अवसरहरू प्रेरणादायी हुन्थे नै, विरोधीहरूसमेत बहसमा अनिवार्य तानिन्थे । तलतलसम्म दस्तावेजहरू पुग्थे । साथै, त्यही अवसरमा प्रतिनिधि छनोटको निर्वाचन हुन्थ्यो, जसलाई हेरेर राजनीतिक सृजनशीलता र जडताका अनेकौं अनुभव लिन सकिन्थ्यो […]
स्याङ्जामा बुबाको किरिया बसेर मत माग्दै खड्का
November 23, 2021 N88LeaveaComment on स्याङ्जामा बुबाको किरिया बसेर मत माग्दै खड्का
सागर न्यौपाने स्याङ्जा । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत स्याङजा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा सोमबार अनौठो दृश्य देखियो । वालिङ खेल मैदानमा भइरहेको मतदानमा झुपो टाउकामा राखेको र सेतो कपडाले बेरिएका व्यक्ति मत माग्दै पुगे । बुवाको मृत्यु भएको चौथो दिन महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन भएपछि गल्याङ नगरपालिका–७ घर भएका खड्का विहानैदेखि मत माग्दै हिँडिरहनुभयो […]
बाबुको ए’सिड प्र’हा’रबाट छोराछोरी घा’इते
November 23, 2021 N88LeaveaComment on बाबुको ए’सिड प्र’हा’रबाट छोराछोरी घा’इते
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीमा आफ्नै बुबाको ए’सिड प्र’हा’रबाट छोराछोरी घा’इते भएका छन् । सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका-५ वसन्तबजारका अन्दाजी ५५ वर्षका मोहन बराइलीले गएराति ८ बजे छोराछोरीमाथि ए’सिड प्र’हार गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ । एसिड लागेर २५ वर्षका छोरा र १६ वर्षकी छोरी घा’इते भएका छन् । उनीहरुको जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा उपचार भइरहेको […]
November 23, 2021 November 23, 2021 N88LeaveaComment on रूकुम उडेको जहाजका पाइलटले यात्रुलाई ‘ड्युटी सकियो’ भनेर नेपालगञ्जमा अवतरण गराएपछि…
काठमाडाैं । त्रिभुवन विमानस्थलबाट रूकुमका लागि उडेको जहाज नेपालगञ्जमा अवतरण गराउने पाइलटलाई पर्यटन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ। क्याप्टेन पेम्बा शेर्पालाई त्यस घटनाबारे स्पष्टीकरण सोधिएको पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले बताए। सोमबार पाइलट शेर्पाले गन्तव्यमा नपुग्दै आफ्नो ड्युटी सकिएको भनेर नेपालगञ्जमा नेपाल वायुसेवा निगमको ट्वीनअटर जहाज अवतरण गराएको आलेले बताए। ‘उहाँले मेरो ड्युटी सकिएको भनेर रूकुम नपुर्‍याई […]
प्रचण्डको सचिवालयबाट पुराना सबैलाई विदा
November 23, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डको सचिवालयबाट पुराना सबैलाई विदा
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो निजी सचिवालय हिजोभन्दा बलियो र प्रभावकारी बनाउने तयारीमा लागेको खबर छ । स्रोत भन्छ, हिजो छोरा प्रकाश हुँदा प्रचण्डको सचिवालय तुलनात्मक रुपमा बलियो थियो । प्रभाव पनि विस्तार गरेका थिए । तर, अहिले छोरी गंगा दाहालले निजी सचिवालयको रुपमा सम्हाल्न नै सकेकी छैनन् । बाँकी सचिवालयका सदस्यहरुको भूमिकामाथि […]
प्रचण्डले देउवा नेतृत्वको सरकार ढाल्ने योजना बनाउन थाले फेरि !
November 23, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डले देउवा नेतृत्वको सरकार ढाल्ने योजना बनाउन थाले फेरि !
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले बनाएको शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ढाल्न लागेको रहस्य खुलेको छ । जसरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार विरुद्ध लाग्नुभएको थियो अहिले त्यस्तै गर्न थालेको एक स्रोतले बतायो । नेपाली काग्रेसका सभापती समेत रहेका एवं प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका प्रचण्डको सम्बन्ध फेरी विग्रिएको हो […]